Madiina Sidonia | Wararka Safarka
Maria | | Magaalooyinka Spain, Getaways, General
Sawir | Gobolka Cádiz
Quruxda iyo jacaylka jacaylka ee Cádiz ayaa lagu soo saaray hal meel: Medina Sidonia, oo ah meel u jihaysan Sierra de Cádiz iyo Badweynta Atlantik oo had iyo jeer ku soo dhaweysa socdaalka gacmo furan.
Dhaqammada kala duwan ayaa ka tagay raadkooda ku aaddan dhaxalka taariikh-faneed ee ballaaran ee Medina Sidonia, oo ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu faca weyn Spain. Shaki la'aan, mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu arko Andalusia.
1 Maxaa lagu arkaa Madiina Sidonia
1.1 Qaansooyinka taallo iyo darbiga
1.2 Qalcadda Madiina Sidonia
1.3 Kaniisada Santa María la Mayor
1.4 Kaniisadda Santiago
1.5 Kaniisada Guusha
1.7 Matxafka Dhaqanka
Maxaa lagu arkaa Madiina Sidonia
Magaaladu waxay ka tirsan tahay mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee dabiiciga ah ee Jasiiradda Iberian, gobolka La Janda lagoon, sababtoo ah hodantinimada deegaanka ee weyn. Si kastaba ha noqotee, xarunta taariikhiga ah ee Medina Sidonia sidoo kale waa mid leh muhiimad weyn waana wax lagu farxo in la arko. Meel taariikhi ah oo loogu magac daray Goobta Fanka Taariikhiga ah iyo Hantida Xiisaha Dhaqanka 2001.
Qaansooyinka taallo iyo darbiga
Darbiga Medina Sidonia wuxuu ka bilaabmay xilligii Islaamka - qarniyadii dhexe ee Islaamka. In kasta oo ay xoogaa yaraatay illaa maanta, haddana waxaan ka fiirsan karnaa qaab-dhismeedkiisa, qaybo ka mid ah ayaa u dhexeeya guryaha iyo kuwa kale oo aad u ballaadhan, taas oo markhaati u ah meesha istiraatiijiga ah ee Medina Sidonia ee Cádiz dhexdeeda.
Meelaha ugu badan ee sawir leh ee derbiga ku yaal waa qaansoleyda iyo irdaha laga soo galo magaalada: albaabka Beytlaxam, iridda Shepherdda iyo iridda Qorraxda.
Albaabka Beytlaxam waa marinka laga galo magaalada qarniyadii dhexe. Waxaa loogu yeeraa maxaa yeelay niche-ka waxaa ku yaal sawirka Maryanka Quduuska ah ee Beytlaxam.
Albaabka Pastora wuxuu leeyahay qaanso faras lagu fuulo iyo jaranjaro weyn oo laga soo galo. Waa albaab Carbeed oo laga soo galo xayndaabka. Waxaa sidoo kale loo yaqaan Puerta de la Salada sababo la xiriira isha dhamaadka jaranjarada.
Puerta del Sol waxay u jeeddaa dhanka bari, marka qorraxdu halkaan ayey u soo baxdaa subax kasta. Meel ku habboon in laga qaado sawirro qurux badan oo safarka Medina Sidonia ah.
Qalcadda Madiina Sidonia
Sawir | Emilio J. Rodríguez Posada Wikimedia Commons
Waa burburka dhisme hore oo ay isticmaali jireen Roomaan, Muslimiin iyo Masiixiyiin oo ku yaal dusha sare ee Castle oo ay hadhay oo kaliya hadhaagii laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad wixii ka dambeeyay waxaa loo isticmaali jiray in laga qodo dhismayaal kale sida Town Hall ama kaniisada weyn ee Santa María la Coronada.
Laga soo bilaabo barta ay ku socoto, 300 mitir oo ka sarreysa heerka badda, waxaa jira aragtiyo aan caadi ahayn oo kuwa hypnotise. Booqashada qalcadda Madiina Sidonia waa fursadda ugu wanaagsan ee lagu ilaaliyo magaalada dhammaan bilicdeeda iyo muuqaalka quruxda badan ee ku xeeran. Fuulashada bartamaha magaalada waa mid aad u wanaagsan oo goobta qadiimiga ah lafteeda ayaa si fiican loogu habeeyay inay ku dhex socoto haraaga taariikhiga ah.
Kaniisada Santa María la Mayor
Meel aad ugu dhow Qasriga qaybta sare ee magaalada waa Kaniisada Santa María la Mayor la Coronada, macbudka Gothic-Renaissance, oo leh qorshe iskutallaabta Laatiinka ah iyo saddex nave oo laga dhisay masaajid duug ah.
Waxay leedahay qaab ciyaareed Herrerian ah oo leh saameyn aad uwanaagsan oo Andalusian Plateresque ah. Si kastaba ha noqotee, gudaha ayaan ka yareynin maxaa yeelay gudaha ayaa ah qaabdhismeedka ugu weyn ee Plateresque, qaabka ugu weyn ee warqadda ama rimidda, xardhka Masiixa ee Dambi dhaafka ee Pedro Roldán laga soo bilaabo 1679, Dambiga Corpus Christi ee 1575, kooxda baroque iyo rococo meeshii allabariga.
Waa kaniisad leh qorshe dabaq afar gees ah, seddex geesood ah iyo qaab Mudejar ah oo leh saqaf heer sare ah oo dusha sare laga soo bilaabay bilowgii qarnigii XNUMXaad. Waxay u heellan tahay ilaaliyaha magaalada iyo Isbaanishka: Santiago el Mayor.
Kaniisadda iyo kaniisadda hadda jirta labaduba waxay leeyihiin asal ahaan qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad. Kaniisada Victoria waxay ka koobantahay sadax Nave, munaarad leben ah iyo qubbad weyn oo waqtigeeda la qurxiyay. Gudaha gudaheeda waxaa ku yaal shaqooyin farshaxan oo aad muhiim u ah in la arko, sida laba farshaxan oo ay soo bandhigtay Martínez Montañés iyo meel sare oo leh Virgen de la Victoria taas oo loo aaneynayo iskuulka Pedro de Ribera.
Sawir | Michael Gaylard Wikimedia Commons
Plaza de España, maalintu waxay bilaabataa goor hore waxayna dhammaataa goor dambe iyadoo la xirayo ganacsiyadooda. Waa xarunta neerfaha ee magaalada waana barta ay ku kulmaan dadka deggan. Halkaan waxaa ku yaal baarar, makhaayado iyo dhul beereedyo aad ka cabi karto socod dheer kadib Madiina Sidonia oo aad dhadhamiso xawaaraha nolosha ee gaabiska ah iyo jawiga caanka ah ee dadka deegaanka.
Intaa waxaa sii dheer, Plaza de España waa Town Hall. Dhisme qaab baroque ah oo ay ku yaalliin Ardaaga Taariikheed ee Dawladda Hoose.
Matxafka Ethnographic Museum ee Medina Sidonia wuxuu dib u milicsanayaa waqtigii loogu talagalay caadooyinka iyo qaab nololeedka dadka Assisi iyada oo loo marayo bandhig dhammaystiran oo aad ka arki karto alaabada guryaha, qalabyada ka shaqaynta berrinka iyo farshaxanada ilaa ururinta alaab dhaqameed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Madiina Sidonia